आज वैशाख ६ गते सोमबारको राशि’फल हेर्नुहोस ।:: Mero Desh
आज वैशाख ६ गते सोमबारको राशि’फल हेर्नुहोस ।
Published on: ६ बैशाख २०७८, सोमबार ०१:१५
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आट त’था पराक्रम बढेर जाने हुनाले व्यापारि व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे आ म्दानि गर्न सकिनेछ खेलकुद तथा खेल क्षेत्र सँग सम्बन्धित कामबाट भनेजस्तो कमाई हुनेछ । दाजुभाई तथा आफन्त बाट सहयोग पाईने तथा आत्मियता बढेर जानेछ । उत्पा दित उद्योगमा लगानि गर्ने गरि पछिको लागि जग बसाउन सकिनेछ । माया प्रेमम सामिप्यता बढेर जानेछ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू, वे, वो) स्वास्थ्यमा गडबडी भई दैनिक कामकाजमा असर पर्ने सम्भावना छ बोलीको गलत अर्थ लाग्ने र लेनदेनमा विवाद बढ्ने सम्भावना छ । सहयो गीहरूले पनि त्यत्ति साथ नदेलान् भेटघाटमा अलमलिनाले काममा बाधा पुग्नेछ । आ’श्वासन दिनेहरूले झुक्या’उन सक्छन् ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) – आफन्तजन तथा परिवारका सदस्यहरुको भेटघाटले दिन रमाईलोका साथ बिताउन सकिनेछ ।खेलकुद तथा अन्य गतिबिधिहरु सौहा र्दपुर्ण बाताबरणमा सम्पन्न हुनेछन् भने पढाईमा समय दिन सकिनेछैन । नयाँ मानिसको आगमनले मनमा उत्साह जाग्नेछ । माया प्रेमको सम्बन्ध झन मजभुत हुँदै जाने योग रहेकोछ । व्यापारमा थोरै समय दिएपनि प्र’शस्त आम्दानि हुँने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) – आफन्त तथा आत्मिय मित्रहरु सँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नुपदा मन बिच लित हुनेछ ।बिद्या तथा प्र्रति’ष्पर्धामा प्र’तिष्पर्धिभन्दा कम जोर साबित होईनेछ । आफन्त तथा अग्र्रज ब्याक्तित्वहरु सँग सैद्धान्तिक बिषयमा राय बाजिनेछ भने घर परिवार तथा आफन्तहरुबाट भनेजस्तो सहयोग नपाईने हुँदा दिगो काम गर्ने अवसर गुम्नेछ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) व्यापार व्यावसायमा बृद्धि भई मनग्गे धन तथा सम्पति जोड्न सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा सोचेभन्दा राम्रो नतिजा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । माया प्रेममा नजिक भई भावना साटासाट गर्ने अवसर जुर्नेछ भने घर परवारमा सबैसँग सम्बन्ध सुम धुर बन्नेछ । पैत्रिक धन तथा सम्पतिको प्र’योग मार्फत आम्दानिका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) – व्यापारमा रुपैया पैसा लगानि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ। आज थालिए का जुनसुकै कामहरुबाट भनेजस्तो कमाई हुँने हुँदा आर्थि क क्षेत्र मजभुत हुनेछ । नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाईने हुँना ले पद प्राप्तिको गतिलो योग रहेकोछ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते)व्यापारमा रुपैया पैसा लगा नि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ। आज थालिएका जुनसुकै कामहरुबाट भनेजस्तो कमाई हुँने हुँदा आ’र्थिक क्षेत्र मजभुत हुनेछ । नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । राज निति तथा समाजसेवामा जनताको स’मर्थन पाईने हुँनाले पद प्राप्तिको गतिलो योग रहेकोछ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो, या, यी, यू) आफन्त तथा शुभ चिन्तकहरुको सल्लाह तथा शुझाबलाई बेवास्ता गर्दा दुख पाईनेछ! व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउने हुनाले आ’र्थिक रुपमा पछाडि परिनेछ स्थाई सम्पतीमा बिवाद आउने योग रहेकोछ भने भौतिक सम्पति तथा अन्य साधनको प्र’योग गर्दा ध्यान दिनुहोला दिदि बहिनी तथा आफन्त सँग अना बस्यक बिवाद हुन सक्छ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) – व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानि हुँने तथा उत्पादन उद्योगमा लगानि गरि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । उत्तम ब’स्त्र, मन पर्ने भोजन तथा भौतिक सम्पति प्राप्तिको गतिलो योग रहे कोछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई बि’श्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ भने जीवन साथिको सहयोगले उपलब्धि मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । लामो दुरिको व्यावसायिक यात्रा हुँने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ! गुरुजनको सहयोगले अध्ययन अध्यापनमा प्रगति भएर जानेछ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा, गी) बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा प्रतिष्पर्धिहरुलाई उछिन्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साध दिनेछ भने आफन्तजन सँग बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आ’र्थिक व्यावस्थापनका मुद्दाहरु हल भएर जानेछन् ! मामा तथा मावली पक्षबाट पनि अपेक्षा अनुसार को सहयोग पाईने योग रहेकोछ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) –प्रेम प्रशङगमा रमाउँन चाहनेहरुका लागि लामो समय सँगै बसेर भावना तथा मन का कुरा साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आकस्मिक लाभ हुँने तथा बाधा अवरोधहरु स्वत हटेर जानेछन् भने भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्रा’प्तिको योग रहेको छ । बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ भने पढाई लेखाईमा राम्रो प्रग ति हुनेछ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा, ची) – खर्च बढ्ने तथा उप लब्धि हात नलाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला !पढाई लेखाईमा मन नजाद अरु भन्दा पछि परिनेछ आमा तथा आफन्त बाट टाडिएरु लामो यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । प्रेममा रमाउने चाहनेहरुका लागि समय उत्तम नहुन सक्छ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट भने आम्दानि गर्न सकिनेछ घर जग्गा तथा सवारि साधनको कारोबार गर्दा ध्यान दिनु होला।